Mbola mitoetra ny fakompakony | NewsMada
Mbola mitoetra ny fakompakony
Efa tapitra ny fe-potoana napetraky ny tomponandraikitra hanesorana ny fako eto an-dRenivohitra. Ny zava-misy anefa, mbola misavovona saika manerana ny tanàna ny fako. Mantsina ny rivotra iainana, ny orana rahateo mbola mitohy mirotsaka. Variana amin’ny inona ny tomponandraikitra ? Mbola mitoetra ary iainana ny fakon’ny taona 2015.
Mijanona ho ambony latabatra hatrany aloha, hatreto, ny fitsinjovana ny fiainam-bahoaka. Ny mpitondra isan-karazany, variana mandamina ny manahirana azy eo amin’ny sehatra iadidiany. Tsy mbola hita hirika ny fahamarinan-toerana politika eo amin’ny fitondrana noho ny tsy fananana depiote ao Tsimbazaza. Hany ka fakoina avokoa izay azo raofina mba hampitony ireo te hitroatra ao an-toerana. Dia io fa mbola mijoro, na mitsingilahila aza, ny fitondrana. Hahatozo taona ihany ? Vao manomboka mantsy izy ity. Efa hijoro tsy ho ela aloha ny andry iray izay azo lazaina ho matanjaka ihany hanohana. Saingy, ny mampanahy ny maro, sao ka olona nosambotsamborina ary noteren-ko masaka ireo ka ho lo olona eto ny firenena. Saika efa goaika antitra eo amin’ny sehatry ny politika mantsy ny ankamaroan’ireo loholona vao nofidiny ny 29 desambra 2015 teo. Mbola hiampy ny hotendren’ny filoham-pirenena izany. Ny irariana, mba ho lohany fitaratra amin’ny tsara fa tsy ho toy ny fary ka ny lohany indray no matsatso. Ho lo am-pitoerana eo ka hivadika fakompakony.
Vaovao ny taona ! Tokony hanaraka izany koa ny toe-tsaina, na ny an’ny mpitondra na ny an’ny vahoaka. Mila miara-mientana ny roa tonta hanatsarana ny tontolo manodidina azy sy ny sehatra iadidiana. Tsy ho tojo anefa izany raha tsy marin-toerana ny fitondrana. Mba hisian’ny fahamarinan-toerana izay, tokony hodiovina ireo fakompakony manimba endrika sy manozongozona mbola miezaka mifikitra amin’izay azony ifikirana. Efa vita tamin’ny 2015 ny hetsika fidiovana sy fanadiovana ka tokony hiaina tontolo madio lavitry ny fahalovana ny Malagasy amin’ity taona ity. Ho voaroaka sy voaraoka ny fako mbola mitoetra. Ho taon’ny fiotazana rahateo ity taona 2016 ity.